व्यवस्था कि व्यवस्थापन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
व्यवस्था कि व्यवस्थापन ?
कार्तिक १५, २०७६ वीणा झा
तिहारमा झिलिमिली बत्ती बाल्न पाउँदा नेपालीहरूको मन निकै प्रफुल्लित छ । त्यसैले कुलमान घिसिङ अहिले सम्मानित व्यक्तित्वभित्र पर्छन् । विगतमा तिहारअघि घर, कार्यालय सफा गर्दा निस्केका प्रयोगविहीन वस्तुहरूको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण हुँदैनथ्यो । तर यसलाई अमेरिकामा पढेर फर्केकी आयुशी केसीले ‘खाली सिसी’ मार्फत सहज बनाइदिएकी छन्, जो फोहोर व्यवस्थापनमा सराहनीय काम गरेको भनेर प्रशंसित छन् । नेपालमा व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या छ ।
सही व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने, देशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन र लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन ठूलठूला योजना कुर्नुपर्दैन । भएका साधनस्रोत पनि कम छैनन् ।
राजनीतिक संरक्षणमा सीमितको लाभका लागि लाखौंलाई दिनको २० घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य पारिएको विगत ताजै छ । केही दिनअघि मात्रै विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत, कसरी चिनीको मूल्यवृद्धि गरियो र चुनाव खर्च लिँंदाको असर सर्वसाधारणलाई पारियो भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी होओस् भन्ने उद्देश्यले नै विभिन्न मन्त्रालय छुट्याइएको हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्दैन र सर्वसाधारणको जीवनमा सहजता थप्न सक्दैन भने किन चाहियो मन्त्रालय ? नातेदार पाल्न ? मन्त्रीहरू कुशल व्यवस्थापक हुनुपर्छ, जसले उपलब्ध र आवश्यक स्रोतसाधनको जोहो गर्दै सही प्रयोगले अधिकतम उपलब्धि ल्याउन सकुन् । केही अपवादबाहेक मन्त्रीपद आफन्त र नातेदार पाल्ने थलोका रूपमा विकसित गरिँंदै छ । अनि परिणाम नआउँदा व्यवस्थामै कुनै खोट छ कि भनी पटक–पटक सर्वसाधारण विकल्पबारे चर्चा गर्ने गर्छन् । जबसम्म सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राखिँंदैन, प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दैन । सही व्यवस्थापन नभएसम्म जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारणको जीवनमा अनुभूति गर्नसक्ने परिवर्तन आउन सक्दैन ।
कहिलेकाहीं त शंका पनि लाग्छ, कतै मेलम्ची खानेपानीको तानाबाना पनि लोडसेडिङजस्तै त होइन ? आखिर त्यहाँ पनि करोडौंको खानेपानीको दैनिक व्यापारको कुरा छ । जस्तो– विगतमा इन्भर्टरको व्यवसाय थियो । कतै नेतृत्व पानी व्यवसायीको कुनै स्वार्थमा फसेका त छैनन् ?
विकसित देशहरूले मारेको फड्को देख्दा प्रभावकारी अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादन देखिन्छ, जसको आधारमा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गरिने परिपाटी हुन्छ । ज्ञान उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू सक्रिय हुन्छन् । किनकि त्यहाँ क्षमतावान्हरूलाई राखिएको हुन्छ, न कि दलीय भागबन्डाका आधारमा । ज्ञान उत्पादनमा संलग्न पात्र, प्रक्रिया र प्रविधि सही हुनु अनिवार्य छ । हामीकहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राज्यले ज्ञान उत्पादनको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सकेन । नेतृत्व तहको व्यवस्थापन क्षमताको कमीले आज विश्वविद्यालयहरू धराशायी बनेका छन् ।
धान उत्पादनमा संलग्न किसानलाई सहजता, सम्पन्नता र सम्मान दिलाउन सकिन्न भने धान दिवस मनाउनुको के अर्थ ? त्यसका लागि व्यवस्थापन कला चाहिन्छ । सामूहिक कार्य गर्नसक्ने क्षमता व्यवस्थापन कलाको प्रमुख अंग हो । धान उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने क्षेत्र मधेस र प्रत्यक्ष संलग्न हुने भनेका किसान हुन् । सिंचाइ, आधुनिकीकरणको अभाव, भण्डारणको व्यवस्थाजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखी त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिनु भनेको यो दिवस मनाउनु हो, न कि बीउको माला लगाएर खेतबाट किसानलाई बोलाई काम रोकी भाषण सुन्न लगाउने परिपाटी । यसमा पनि व्यवस्था होइन, व्यवस्थापनकै कुरा आउँछ । हरेक स्थानीय तहमा डोजर त पुग्यो, तर खेत खन्ने ट्याक्टर पुग्न सकेन, किन ? कृषिप्रधान देशमा पहिलो प्राथमिकतामा कुन पर्नुपर्थ्यो ?
हरेक स्थानीय तहमा खेत जोत्ने ट्याक्टरका साथै आधुनिक कृषि औजारको व्यवस्था गर्न, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने खेतीयोग्य जग्गा, चाहे त्यो व्यक्तिको होओस् वा सरकारको, खनजोत गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई जग्गाको करमा समायोजन गर्न केले रोकेको थियो ?
यसले एकातिर कृषि क्रान्तिको सुरुआत हुन्थ्यो भने, अर्कातिर समाजलाई युवाविहीन हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । साथै जग्गा बाँझो होइन, हराभरा हुन्थ्यो । स्रोतको सही व्यवस्थापन गरी विभिन्न उमेर समूहका बेरोजगारहरूलाई कृषि उत्पादनमा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो ।
गत साता किसानहरू उखुको पैसा नपाएकामा आन्दोलनमा उत्रिए । दूध उत्पादनमा संलग्न किसानले सडकमा दूध पोख्ने अवस्थाको सिर्जना बारम्बार हुन्छ । किसानको तरकारी खेतमा कुहिन्छ, तर काठमाडौंको बजार भारतीय तरकारीले चल्छ । यी सबै बेथिति समाधान गर्ने हो भने सरकारले एउटा यस्तो प्लेटफार्म बनाइदिनुपर्छ, जहाँबाट किसानले ढुक्कसाथ मल, बीउबिजन र अन्य आवश्यक सामग्री लान सकून् र तिनको उत्पादन खेतबाट बजारसम्म सहज रूपमा पुग्न सकोस् । यसका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ ०७:५४
भाद्र २१, २०७६ वीणा झा
महत्त्वपूर्ण पदमा बसेकाहरू प्रायःजसो शब्द चयन र संवाद शैलीप्रति त्यति संवेदनशील भएको देखिँदैन । तिनीहरू बारम्बार विवादमा आउने बिभिन्न कारणमध्ये शब्द चयन र संवाद शैली पनि एक हो । पछिल्लो उदाहरण हेरौं । आउँदो संविधान दिवसको बिदा कसरी मनाउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका शब्द चयन र संवाद शैली चर्चाको विषय बनेको छ ।
गतवर्ष सेप्टेम्बरतिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकियोङ हवाई अड्डाको उद्घाटनपछि सिक्किमेलीलाई गरेको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालमा खुब मनपराइएको थियो । कारण तिनले नम्र तरिकाले नेपाली भाषामा गरेको सम्बोधन थियो । मोदीका शब्द चयन र संवाद शैलीले सिक्किमेलीहरूले सम्मानित भएको अनुभूति गरे । त्यसले मोदीको प्रतिष्ठा बढाएको थियो ।
सिक्किम भारत भित्रकै भाग हो र पनि तिनले किन त्यस्तो गरे होलान् ? सम्भवतः एउटै उद्देश्य होला, अपनत्वको अनुभूति गराउने । केही महिनाअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटप्रति बिभिन्न व्यक्ति र निकायले तिनलाई आफ्नो धरातल बिर्सेर ‘रेसियल’ अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका थिए । यसबाट के प्रस्टिन्छ भने शब्द चयन र संवाद शैलीले व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोण अथवा भनौं छवि निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
सम्बन्धहरूको विस्तार र संकुचनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ । त्यसैले राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसिनहरूले शब्द चयन गर्दा संवेदनशील हुनुपर्छ । तिनका शब्द, शैली र संवादले कुनै पेसाकर्मी र सर्वसाधारणलाई उपेक्षित, अपमानित र मूल्यहीन भएको महसुस नहोस् । सरकार तिनका समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने अनुभूति भइरहोस् । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले आफ्नो इच्छालाई मात्रै केन्द्रमा राख्न मिल्दैन ।
लिखित नभए पनि समाजले पद अनुसारको मर्यादा अपेक्षा गरेको हुन्छ । सत्तासिन, प्रतिपक्षी तथा जुनसुकै तन्त्रमा पनि प्रायः सत्ता वरिपरि देखिने केही खास पदमा आसिनका शब्द चयन र संवाद शैली देख्दा हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो छ र हामी कुन युगमा छौं भन्ने प्रश्न मनमा उठ्छ । तिनका शब्द, शैली र संवादले बेलाबखत सत्ताको उन्माद प्रस्ट देखाउँछ । तिनका असंवेदनशील प्रस्तुतिले बेलाबखत सरकारलाई विवादमा समेत तान्ने गरेको अनेकौं उदाहरण छन् ।
कहिले ट्विटमा दोहोरी खेल्ने त कहिले मिडियासामु औंला ठड्याउँदै आफू ज्ञानले पूर्ण रहेको भान दिने प्रस्तुतिमा प्रयोग गरिने शब्द चयन, शैली तथा प्रस्तुतिले तिनका संवेदनहीनता प्रस्ट देखिन्छ । अहिले आम नागरिकले पत्रिका हेर्दा, टिभी खोल्दा वा सामाजिक सञ्जालभित्र छिर्दा जताततै सरकारमा बसेकाहरूको असंवेदनशील शब्द, शैली र प्रस्तुति देख्छन् ।
यसले समाज र सरकारको दूरी घटाउनुको सट्टा बढाएको छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयको एक वर्षको कार्य समीक्षा सुनाउन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । जुन शैलीमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याप्रति गृहमन्त्रीले शब्द चयन गरे, त्यो कुनै पनि हालतमा नेपाली समाजमा स्वीकार्य थिएन ।
निषेध र नियन्त्रण बिलकुलै फरक अर्थ दिने शब्दहरू हुन् । गृह मन्त्रालय छ । प्रहरी प्रशासन छ । न्याय सर्वोपरी हो भन्ने विश्वासले गर्दा समाजलाई ढुक्क बनाउँछ र सर्वसाधारणको ढुक्क भएर बाँच्ने आत्मविश्वास बढ्छ । तर गृहमन्त्रीका शब्द चयनले सर्वसाधारणका जीवनप्रति सम्बन्धित निकायको संवेदनशीलता कतिको छ भन्ने शंका उब्जायो । प्रयोग गरिने शब्द र शैली आफ्नालागि भन्दा पनि अरुका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आफूले के सोचेर प्रयोग गरेको भन्दा पनि जसका लागि प्रयोग गरियो, तिनले के अनुभूति गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सम्मानित पदमा आसिनहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल र बिभिन्न मिडियामा प्रयोग गरिने अनुपयुक्त शब्द चयन र शैलीले विश्वसामु हाम्रो संस्कारलाई गिज्याउने गरेको छ । यसले भावी पुस्तालाई कस्तो संस्कार सिकाउला र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ । किनकि समृद्धिका लागि सम्मानको अनुभूति आवश्यक हुन्छ ।
‘दिनभरि बीपी रातभरि विप्लव’, ‘भेट्ने बानी परेकाहरूले भारतबाट आएकालाई भेटेका होलान्’ जस्ता शब्द चयन र प्रस्तुति सही र आवश्यक थिए ? के विशिष्टहरूले बोल्ने शब्द यिनै हुन् ? शब्दको सही प्रयोगले समाजलाई उत्साहित बनाउन सकिन्छ भने गलत तरिकाले प्रयोग गरियो भने निराशा र अन्योल बढाउँछ ।
अकर्मण्यताका कारण बेलाबखत कुर्सी असुरक्षित महसुस हुँदा समाजलाई त्रसित बनाउँदै बिभिन्न शब्द चयन गरेको पाइन्छ । ‘गणतन्त्र खतरामा’, ‘हाम्रो सार्वभौमिकता खतरामा’ जस्ता प्रस्तुति पनि कम खतरनाक होइनन् । सही शब्द प्रयोग गरेर बोल्दा या लेख्दा शब्दको मात्र होइन, समाजकै सामर्थ्य बढ्छ । जसले स्वस्थ समाज निर्माणमा टेवा पुग्छ ।
जुन कुरा किताबबाट भन्दा समाजबाट सिकिन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०८:३२